Madaxwaynaha oo soo dhaweeyay ku dhawaaqista musharrixiinta Aqalka Sare. | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha oo soo dhaweeyay ku dhawaaqista musharrixiinta Aqalka Sare.
Madaxwaynaha oo soo dhaweeyay ku dhawaaqista musharrixiinta Aqalka Sare.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku bogaadiyay dowlad goboleedyada Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland tallaabada ay ku soo gudbiyeen liisaska musharrixiinta Aqalka Sare ee doorashada 2016-ka.
“Sidaan horay u sheegay waxaa mar walba madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada ka go’an inay fududeeyaan qabsoomidda doorashooyinka 2016-ka. Waxaa tallaabadan ay qaadeen madaxda Dowlad Goboleedyada ee ay ku soo gudbiyeen liiska musharrixiinta Aqalka Sare ay dhiirigelinaysaa in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talogaley’’.
Madaxweynaha ayaa sheegay in horumarka laga sameeyay soo gudbinta liisaska ka sokow loo baahan yahay in la dhaqan-geliyo qoondada haweenka ee 30% ay ku leeyihiin labada aqal.
“Waxaan baarlamaannada sharafta leh ee Dowlad Goboleedyada ka codsanayaa in marka ay u codeynayaan xubnahan ay tixgeliyaan in la helo qoondada haweenka ay ku leeyihiin Aqalka Sare. Waxaan qof walba xusuusinayaa in qoondada haweenka ay ku timid go’aan siyaasadeed oo heer qaran ah , ayna tahay in sidii loogu talogaley loo fuliyo’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn ugu baaqay guddiyada doorashada ee heer gobol iyo heer Federaal inay dar-dargeliyaan hawlaha lagu xaqiijinayo doorashada 2016, isagoo dhanka kalena ugu baaqey hay’adaha kala duwan ee Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada inay hawlaha doorashada si hufan uga qaataan kaalinta kaga aaddan.
Previous articleKoonfur Galbeed oo ku dhawaaqday musharrixiinta xubnaha Aqalka Sare.
Next articleRuushka oo is hor-taagay nabadaynta Suuriya.